မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ (မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ | မေတ္တာရိပ်
← ဆရာတော်များ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများ
ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး →
မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ (မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ	Posted on April 30, 2011	by mettayate နီးလျှက်ဝေး
ခြင်္သေ့သည် ကျားကို နိုင်၏။ ကိုယ်တွင်းက ခွေးလေးသန်းကို မနိုင်။
မသူတော်သည် သူတော်ကောင်းကို နိုင်၏။ ကိုယ်တွင်း အကုသိုလ်ကို မနိုင်။
မသူတော်သည် သုခကြိုက်လျက် နတ်ပြည် မတက်။ ဒုက္ခမှန်းသိလျက် ငရဲ ဆင်းရ၏။
မသူတော်သည် မိမိမေတ္တာရှိသော သူတော်ကောင်းကို ပစ်မှားနိုင်၏။
သူတော်ကောင်းသည် မိမိမေတ္တာပျက်သော မသူတော်ကို ချစ်နိုင်၏။
မသူတော်ကား လာဘ်ရဖို့ ကြံ၏။
သူတော်ကောင်းကား တရားရဖို့ ကြံသည်။
သူတော်နှင့် မသူတော်သည် ရှေးကံအကြောင်းလည်း ဝေးသည်။ နောက် လားရာဂတိလည်း ဝေးသည်။
မသူတော်သည် အစားကောင်း စားလျက်၊ အိပ်ရာကောင်း အိပ်လျက် တရားမှ လက်လွတ်သည်။
ဘောဇဉ်အရာသာကို သူနာ မစား၊ နိဗ္ဗာန်အရသာကို မသူတော် မစား။
ဘုရားရှင်သည် မြင်းမိုရ်တောင်ကို ဖ၀ါးအောက် ရောက်စေနိုင်၏။ ပုရာဏကဿပကို အနားရောက်အောင် မတတ်နိုင်။
ခြင်္သေ့မင်း ဟောက်သံကြားလျှင် ဘေးကင်းရာသို့ လူများပြေးကြ၏။ ခွေးလှေးကြမ်းပိုးကား အိပ်ရာမှာပင် မနိုး။
ဘုရားရှင်၏ တရားသံကိုကြားလျှင် နိဗ္ဗာန်သို့ အများ ပြေးဝင်၏။ မသူတော်ကား အိပ်ရာမှ မနိုး။
ကျင်ကြီးသည် နွေးသည် ဖြစ်စေ၊ အေးသည် ဖြစ်စေ၊ အဆင်းလှသည် ဖြစ်စေ၊ မလှသည် ဖြစ်စေ ရွံ့ဖွယ်သာတည်း။
မသူတော်သည် အမျက်ထွက်သည် ဖြစ်စေ၊ မထွက်သည် ဖြစ်စေ၊ စကားလှသည် ဖြစ်စေ၊ မလှသည် ဖြစ်စေ ရွံ့ဖွယ်သာတည်း။
မီးခဲသည် ပူသောအခါ လက်ကို လောင်၏။ အေးသောအခါ လက်ကို မည်းစေ၏။
မသူတော်သည် ဒေါသ အခါ ကြောက်စရာ၊ လောဘအခါ ရွံ့စရာ ဖြစ်၏။
အရှင်မောဂ္ဂလာန်သည် မြေကို အထက်အောက် လှန်နိုင်၏။ မသူတော်၏ အကြံကို မလှန်နိုင်။
ခွေးရူးကိုက်လှင် ထိုသူ ရူး၏။ ထိုသူ ကိုက်လျှင် နောက်လူ ရူး၏။ ခွေးရူးသည် လူကောင်းအဆက်ဆက်ကို ရူးစေ၏။
မသူတော်သည် သူကောင်း အဆက်ဆက်ကို ယုတ်မာစေ၏။
(မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ)
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.	← ဆရာတော်များ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများ